Sheekh Shaakir ka digay doorashada ka dhaceysa Dhusmareeb dalabna u diray Beesha Caalamka – Hornafrik Media Network
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo garabka Ahlu-Sunna ay dhawaan madaxweynaha Galmudug ayaa digniin ka soo saaray doorashada maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa saqdii dhexe ee xalay qoraal uu soo saaray, kuna qornaa afka qalaad waxa uu gaarsiiyay Beesha Caalamka, isagoo markaasi ka digaya cawaaqibka ka dhalan kara, haddii dowladda federaalka iska indho tirto doorashadii maalmo ka hor isaga lagu soo doortay, isla-markaana ay qabato doorasho kale.
Qoraalka ka soo baxay xaafiiska Sheekh Shaakir waxaa lagu sheegay inay dowladda federaalka qaadi doonto masuuliyadda wixii dhimasho iyo burbur ah ee ka dhasha fowdu uu sheegay inay dowladdu ka abuureyso Galmudug.
Khilaafkan hareeray dhismaha Galmudug ayaa cirka isu sii shareeray, ka dib markii dowladda federaalka lagu eedeeyay inaanay doorashada ka dhigin mid daah-furan, isla-markaana ay cid gaar ah ku taageereyso. Tani ayaa waxay Galmudug ku jiheysay jid ay seddax maamul ku yeelaneyso Galmudug-tii lagu howlanaa yagleelideeda.
Kismaayo: Xubin ka tirsan is-bedel doonka Jubbaland oo xalay gurigiisa lagala baxay